ကမ္ဘာပေါ်က အတွေးအခေါ်ရှင် ၁၀၀ မှာ ထိပ်တန်း ပါဝင်သူတဦးအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီက ထုတ်ဝေတဲ့ Foreign Policy နိုင်ငံခြားရေးရာ မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အမှောင်ကျနေတဲ့အရပ်မှာ မျှော်လင့်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ် သက်ရှိထင်ရှားနေတဲ့ သင်္ကေတပိုင်ရှင်အဖြစ် ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလအတွက် ထုတ်ဝေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ နှစ်လည် အထူးထုတ်မှာ ဒီစာရင်းကို ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ Mr. Frank Bernake ကို စီးပွားပျက်ကပ်အသစ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သူအဖြစ် နံပါတ် ၁ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နံပါတ် ၂ ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အခန်းဂဏ္ဍကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ခဲ့သူအဖြစ် အမေရိကန်သမ္မတ Mr. Barack Obama ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
မဟတ္တမ ဂန္ဒီနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံစည်းမျဉ်းဖြစ်တဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး အနှစ် ၂၀ အတွင်း ၁၄ နှစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ဖော်ပြချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မိန့်ခွန်းတရပ်မှာ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဟာ နေ့စဉ် လူနေမှုလက္ခဏာ တရပ်အြ…
Please come and enjoyafun evening of Burmese food, dance, costume, crafts andaraffle, in support of poverty relief and education in the Irrawaddy delta region of Burma (Myanmar).
Sunday December 6th,6- 9pm
Buffet opens from 6pm, show starts 6:30pm.
In the Newman Room at the Catholic Chaplaincy, The Old Place,
Rose Place, St Aldate's, Oxford
Enjoyacultural show highlighting the colourful traditional costumes, music and dances of several of the races of Burma, and featuringatraditional puppet show performed byamaster of this art.Sampleadelicious buffet throughtout the evening featuringavariety of classic Burmese savoury and sweet dishes, together with wine, beer and soft drinks.Admire and buy examples of traditional Burmese craftwork in laquer, tapestry, textiles and other materials - they make ideal Christmas presents!Experience the magic of Thanakah skincare, and learn why Burmese of all ages have used it on their faces for centuries.Tickets:
Adults - £1…
မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ သီချင်းများနှင့် ငပိရည် အရှုပ်တော်ပုံ
မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ သီချင်းဟောင်း သီချင်းကောင်းလေးတွေကို Oxford မှာ ပြုလုပ်မည့် Culture Show အတွက် ရှာဖွေရှင်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းတွေ ကူပြီးရှာဖွေပေးတဲ့ မရှင်မင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒီသီချင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နားယဉ်ခဲ့ဖူးပြီးသား သီချင်းလေးတွေပါ။ Come To Myanmar ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကတော့ အန်တီနွဲ့ယဉ်ဝင်း ရေးစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး နွဲ့ယဉ်ဝင်း၊ စိမ်းမို့မို့၊ ဟေမာနေဝင်း၊ သန္တာဦး၊ မီမီဝင်းဖေ နှင့် ပိုးဒါလီသိန်းတန်တို့ သီဆိုထားပါတယ်။ English Version ရော မြန်မာ Version ရောပါပါတယ်။ နောက်နှစ်ပုဒ်ကတော့ အေးချမ်းမေရဲ့ လှမ်းလာခဲ့ပါ ပြည်မြန်မာ နှင့် ချိုပြုံးရဲ့ အလှကမ္ဘာ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းအားလုံး လေးပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။
မြန်မာပြည် ... တောတောင်ရှူ့ခင်းတွေနဲ့
ဝင်းဝါတဲ့စပါးခင်းရယ် ... သဘာဝ အလှအပတွေခြယ်
စာသားလေးတွေကြားလိုက်ရုံနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ချက်ချင်းသတိရလွမ်းဆွတ် သွားစေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရဲ့ မြို့ပြတွေမှာ မြင်တွေနေကျ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဝင်းဝါနေတဲ့ စပါးခင်းတွေဟာ တကယ့်ကိုပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ Trade Mark တစ်ခုလိုပါပဲဗျာ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ အ…
(၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ထုတ်၊ Popular News ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း သမားနဲ့နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်နေပုံလေးနဲ့ သတင်းစာ ဆရာများဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးတဲ့အခါ ဘက်လိုက်သင့် မသင့် ဆိုတာကို စဉ်းစားနိုင်ဖို့မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။ )
နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များနဲ့ နိုင်ငံရေး ပညာရှင်များရဲ့အဆိုအမိန့်များထဲက ကောင်းနိုးရာရာ လေးတွေကို ရွေးချယ် ရေးသားပြီးအပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ တစ်နေ့ကတော့ အဆိုအမိန့် တစ်ခုကို ဘာသာပြန်ရင်း ကျွန်တော် အတော်လေး သဘောကျပြီး ပြုံးမိပါတယ်။
"Becomingapolitician is the only step down I could take from beingajournalist." ~ Jim Hightower
နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်လာတာဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သတင်းစာဆရာ ဖြစ်ဖို့ကနေ အောက်တစ်ဆင့်ပဲ လျှော့ထားတာ။ (ဂျင် ဟိုင်းတာဝါ)
ဟိုင်းတာဝါ (၁၉၄၃ ဖွား) ဟာ ဆင်ဒီကိတ် ကော်လံ ဆောင်းပါးရှင်၊ လစ်ဘရယ် ဝေဖန်ရေးဆရာ၊ ပေါ်ပြ…
ဖြေ။ ။ US Campaign for Burma က Jeremy Woodrum နဲ့အတူ ရေးတာပါ။ ကမ္ဘာတ၀န်းက အခြားသော အာဏာရှင် တွေဖြစ်တဲ့ ကင်မ်ဂျုံအီးလ်၊ ဆာဒန် ဟူစိန်၊ မူဂါဘီ စတဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ တွေက ရှိပေမယ့် မြန်မာပြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအကြောင်းကကျတော့ မရှိသေးတာနဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က အဲ့ဒါကို ရေးဖို့ စိတ်ကူးရမိတာပါ။ အာဏာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြတာဟာလည်း အဲ့ဒီသူတို့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘယ် လိုတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ပြောပြတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတခုပဲလို့လည်း မြင်တယ်လေ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အကြောင်းက…
Live Demo ~ Download this template
မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Blogger Template ကို အရေခွံလဲဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ Blogger များအတွက် ProPress ဆိုတဲ့ Template ကို ပြောင်းလဲသုံးကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ အထက်ပါ ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်း ရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Template တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ WigetsForFree ကနေ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Blogger Template ဖြစ်ပြီး TheBlogTemplates.com မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
တော်တော်လေး ရီရတဲ့ Video Clip တစ်ခုပါ။ အိမ်သာတက်နေရင်း ဟာသလုပ်ပြီး လျောက်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ... ရှူရင်းဆို ... ဆိုရင်းရှူနေရတဲ့ သဘောပေါ့ :P တစ်ချို့လူတွေကလည်း ဟာသတွေကို ကြံကြံဖန်ဖန်လုပ်ကြတယ်။ Video တင်ထားတဲ့သူနဲ့ video ထဲမှာပါတဲ့သူက သူငယ်ချင်းတွေပါ။ Video တင်ထားတဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ ဒီဗွီဒီယိုမှာပါတဲ့သူက သူ့ပုံကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ MySpace ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက် အခုပြန်ပြီး လက်စားချေထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကဲ .. အဲဒီတော့ ... တစ်အိမ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေ စုနေကြတယ်ဆိုရင် သတိထားကြနော် ... အိမ်သာတက်နေတဲ့ပုံကြီး အွန်လိုင်းရောက်သွားရင်တော့ +_*&^%$ ... :P ဟတ်ဟတ်
စကားမစပ် ... အိမ်သာတက်ရင်း မီးပျက်တဲ့ ဒုက္ခ၊ အိမ်သာတက်ပြီးမှ ရေမလာတဲ့ ဒုက္ခ၊ အိမ်သာတက်ပြီး တစ်ရှူးကုန်/မရှိတော့တဲ့ ဒုက္ခ ကြုံဖူးလား ? ကြုံဖူးရင်တော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ ... ဟိဟိ .. Just curious :)
ဒီပို့စ်လေးက ကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာသားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြေခိုင်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မေးလ်ကနေ ပို့ပေးထားတာပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းကတော့ လူတိုင်းမှာ မရှိပါဘူး။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ပြေခိုင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝမှာ စိတ်တူကိုယ်တူ အမြဲပေါင်းသင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲလို့ လက်ချိုး ရေတွက်ကြည့်ဖူးပါသလား.. ? ကိုယ်နဲ့ အခုမှ ခင်မင်ရင်းနှီးပေမဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပေါင်းလာတဲ့ ငယ်ပေါင်းလို ဘာမဆို ဖွင့်ပြော တိုင်ပင် မျှဝေလို့ ရနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကော ရှိဖူးလား …? ရှိတယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးပါ။
ကံတရားက ဆန်းကြယ်တယ်။ ကိုယ်မထင်မှတ်၊ မမျှော်လင့်တဲ့ အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဆီ အရောက်ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီလူက ကိုယ်မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရောက်မလာတတ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ်က တန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူရီးစားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့တုန်း၊ ဆုံတုန်း သူတို့ကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Megavideo မှ Video များကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ပိုက်ပိုက်ပေးထားတဲ့ user မဟုတ်ရင် 72 မိနစ် အချိန်ထပ်စောင့်ပြီးကြည့်ရပါတယ်။ အဲဒီ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် MegaStreaming ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိမိကြည့်လိုတဲ့ Video ရဲ့ address link ကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ (၁၃၄ မိနစ်) ဆက်တိုက် ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်တွေ့တာနဲ့အတော်ပဲ ... မောင်တို့ချယ်ရီမြေ ဇာတ်ကားကို ပြန်နွှေးပြီး ခံစားလိုက်ဦးမယ် ;)
Facebook ကို Web Browser မှာ မကြည့်ဘဲ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာ Desktop ပေါ်မှာပဲ Software တစ်ခုသုံးရသလိုမျိုး ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Fishbowl ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Fishbowl ဆိုတာကတော့ Facebooker တွေ အတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားထားတဲ့ Desktop Client Application တစ်ခုပါ။ သတင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ ကွန့်မန့်တွေ၊ like/unlike တွေအပြင် Photo တွေကိုပါ Upload လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Trial အဆင့်သာရှိသေးပြီး မြန်မာစာရိုက်လို့တော့ မရသေးပါဘူး။
Facebook အသုံးပြုသူ မိတ်ဆွေများ အထက်ပါပုံမျိုးကို မိမိရဲ့ Wall မှာဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Wall တွေမှာဖြစ်စေ တွေ့ခဲ့ပါက လုံးဝ Click မလုပ်မိပါစေနဲ့။ လုပ်မိခဲ့ရင်တော့ CSRF worm တိုက်ခိုက်တာ ခံသွားရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ worm ဘယ်လို attack လုပ်တယ်ဆိုတာကို အောက်ပါ Video မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Facebook ကတော့ အဲဒီလို သံသယဖြစ်ဖွယ် Link တွေ၊ ပုံတွေကို Click မလုပ်မိစေဖို့အတွက်လည်း သတိပေးထားပါတယ်။ Faceebookerတွေ သတိထားကြပေတော့ ;)
2104th Shan/Tai New Year Celebrations at SOAS University
ယူကေရောက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများရဲ့ ၂၁ဝ၄ နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနား နှင့် ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကို ယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီခန့်မှ ၅ နာရီထိ SOAS University မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို Shan Cultural Association in the United Kingdom (SCA-UK) မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြီး အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ Oxford မှ ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ နှင့် ဆရာတော်များ၊ လန်ဒန်မှ ရှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှု စိတ်ဝင်စားသူများ နှင့် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်များ စုံလင်စွာတက်ရောက်ကြတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ရှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ရှမ်းအက၊ ရှမ်းသီချင်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မို့ အဆိုပါအခမ်းအနားပြီးသည်အထိ အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ
ဒါတော့ ဘာ"အက"လည်း မသိ ... တရုတ်"အက"နဲ့တော့ဆင်သည် :P
ရိုက်မယ် ... တီးမယ်
အလှူငွေထည့်ဝင် လှူဒါန်းနေသည့် ဆရာတော်
ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတွေကို လန်ဒန်မှာ ၂ဝဝ၆ ကတည်းက စတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါ…
ရာသီဥတုက သိသိသာသာအေးလာပြီး ဟေမာန်ဆောင်းရာသီသို့ ဝင်ရောက်လာလေပြီ။ နောက်လဆိုရင် ၂ဝဝ၉ ကို နှုတ်ဆက်မည့် နောက်ဆုံးလ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်တော့မယ်။ ဒီဇင်ဘာသီချင်းလေးတွေ နားထောင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီဇင်ဘာနှင့် ပက်သက်တဲ့ သီချင်းဟောင်း၊ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းထားပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အခုတလော ဒီဇင်ဘာသီချင်းလေးတွေကိုပဲ နားထောင်နေမိတယ်။ အထူးသဖြင့် မန်းလေးရဲ့ ဒီဇင်ဘာညတွေကို သတိရတဲ့အခါတိုင်းမှာပေါ့ဗျာ။ သြော် ... ဒီလိုနဲ့ပဲ ... နာရီစင်ကြီးရယ် ... မကြာပြီဆိုညည်းတော့မယ် ... သီချင်းများကြားထဲ ... နှစ်တစ်နှစ်ကုန်တော့မယ်။
ဒီဇင်ဘာနှင့် ပက်သက်တဲ့ သီချင်းဟောင်း သီချင်းကောင်းလေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း ကျေးဇူးပြုပြီး မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ :)
အိုဘားမားပြောတဲ့ တရုတ်ပြည်က Twitter နှင့် မြန်မာပြည်က အင်တာနက်
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားဟာ တရုတ်ပြည်ကို အင်တာနက် ကွန်ယက်တွေအားလုံး ဖွင့်ပေးထားဖို့ အရေးကြီးကြောင်းနှင့် Twitter ကဲ့သို့သော social networking site တွေကို မပိတ်ပင်ဖို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Via : http://bit.ly/Nfl
သမ္မတကြီး အိုဘားမားရေ တရုတ်ပြည်တင်မဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း မြန်မာပြည်က သူ့ရဲ့မွေးစားသား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုပါ ဝင်ပြီးပညာပေးလေး ဘာလေး လုပ်ပေးပါဦး။ အင်တာနက် ပိတ်ပင်ခြင်းဟာ ခေတ်လူငယ်တွေကို မျက်စိတွေ နားတွေ ပိတ်ထားတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အခုလို Social Networking site တွေကို ပိတ်ပင်တာဟာ ပညာလိုချင်၊ ဗဟုသုတရှာဖွေချင်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ပင်ရိုက်ချိုးထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ Facebook နဲ့ Twitter လိုမျိုး site တွေဟာ Information တွေကို အလွယ်တကူ မျှဝေဖို့အကောင်းဆုံး website တွေပါပဲ။ နည်းပညာခေတ်ရောက်နေပြီး နည်းပညာခေတ်ရဲ့ အရသာကို အပြည့်အဝမခံစားနိုင်အောင် လုပ်ထားတာဟာ လုံးဝမတရားပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်မည့် လူငယ်တွေရဲ့ ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုးကြီးဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ကို အပြည့်အဝမသုံးနိုင်အောင် ပိတ်ပင်ထားခြင်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် စစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက…
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ၂ဝဝ၉ တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပါ့သ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်များ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ရွှေတံဆိပ်များဆုရှင် အငြိမ့်မင်းသမီး ဒါလီလင်း (ရွှေမန်းသဘင်) လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စင်ပေါ်မှာ တော်ဂေါ်လီသီချင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပြီး အိုးလေးအလှုပ်လွန်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ သို့သော သို့သော မှတ်ချက်များအပေးခံနေရပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အငြိမ့်မင်းသမီးနှင့် ဒီလိုအကတွေကတော့ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တရားလွန်ဖြစ်အောင် ကပြဖျော်ဖြေခြင်းကတော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တစ်ချို့သော အနုပညာသည်တွေဟာလည်း ပြည်တွင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေရယ်၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု စည်းမျဉ်းတွေကြောင့် ပြည်ပဖျော်ဖြေပွဲတွေဆိုရင် တရားလွန် ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ကပြဖျော်ဖြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သို့ကြောင့် သူတို့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆို ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ပဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ တရားလွန် မဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ :)
How to solve Windows cannot configure this wireless connection problem
Windows XP Service Pack2ဒါမှမဟုတ် Windows XP Tablet PC Edition 2005 ကို Update လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ PC ကို ပြင်ပေးတုန်းက ရလိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ဘလော့ပေါ်မှာ ရေးမှတ်ထားရင်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အဲလို Wireless Network တွေကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ... Wireless Zero Configuration service WZC ကို Disable လုပ်ထားမိလို့ပါပဲ။ Enable ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်1. Click Start, click Run, type %SystemRoot%\_system32\_services.msc /s,
4. In the Service status area, click Start, and then click OK. Via: Microsoft Help and Support
Google Dashboard isanew service that showsasummary of the data stored withaGoogle account. You'll soon findalink to Google Dashboard in the "personal settings" of the "my account" page.
Iapeel is the way to dress your iPod, iPhone and iTouch. An iaPeel shin isapermium glossy material thae adheres to your iPod or iPhone viaaremovable adhesive. The skin protects your device from scratches while allowing personalization.